5 Ga-Hụ Nlereanya Mgbasa Ozi Dijitalụ | Martech Zone
Anyị na ndị ahịa anyị anwale. Zmags, maka ụfọdụ ndị ahịa na onye na-ele ha dị jụụ. Achọrọ m igosipụta ụfọdụ ihe atụ nke, ihe m kwenyere, bụ ụfọdụ ngwa mmekọrịta mmekọrịta dị ịtụnanya! Iji mepee onye nkiri ahụ, pịa na nseta ihuenyo nke onye nkiri ahụ!
Ndị ahịa nke ngwaahịa Zmags Commerce Pro na-ahụ nsonaazụ dị egwu, gụnyere a 5x na-abawanye na echiche peeji, Oge 2x nọrọ na saịtị, ruo a 2x na-ebuli na ọnụego mgbanwe na a 55% mmụba na nkezi iji uru!
Nlekọta CVS - vidiyo, peeji nke mmekọrịta display ihe ngosi na-egbuke egbuke!
N'ime Nkwakọ ngwaahịa - na aka nri bu akwukwo ndi gara aga!
Nri nke Nri na edozi - onye mmeri na DMA Digital Magazine Awards, a mmekọrịta dijitalụ magazine bụ a ga-ahụ… na mmekọrịta mgbasa ozi na agbakwunyere vidiyo.
Cell C Magazine - ojiji puru iche nke mgbasa ozi mmekorita dijitalụ. Lelee Just for Boys, Naanị maka ụmụ agbọghọ nhọrọ na peeji nke 10!
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-eji mbipụta dijitalụ ozugbo na saịtị ha! Lelee Dick's Sporting Goods 'Lookbook… nke ejikọtara na sistemụ ecommerce ha, onye na-ekiri ya na-egosiputa ọnọdụ mmekọrịta. Pịa na akara ngosi + na ịnwere ike ịgbakwunye ihe ahụ ozugbo ụgbọ ibu azụmahịa gị!
Akụkụ ọzọ dị egwu nke Zmags bụ na ị nwere ike itinye koodu Google Analytics UA gị ma tụọ ojiji na mmekọrịta nke mbipụta dijitalụ gị.
Tags: dijitalụ magazinembipụta dijitalụdijitalụ ekwusara n'elu ikpo okwummekọrịta mmekọrịtaazụmahịa azụmahịaecommerce